Inkungu yakha kanjani | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Esinye sezimo zesimo sezulu kunzima kakhulu ukubikezela ngokungangabazeki inkungu. Akuyona enye into ngaphandle kokwakhiwa kwefu elikhulu ezingeni lomhlabathi nge Umswakama ongu-100%. Imvamisa kuvame kakhulu ezindaweni eziningi zezwe nasezinyangeni lapho zivame ukuzibonakalisa khona kaningi. kunguDisemba nangoJanuwari. Ngokulandelayo ngizokutshela okwengeziwe ngalesi simanga somkhathi esimangazayo nesiyingozi.
Amafomu enkungu ezimeni zokuzinza ngokuphelele, ngaphandle komoya nangokuba khona kwe-anticyclone. Inkungu ayisoze yakha nge-squall. Le nto ivela lapho izinga lokushisa liphansi izingqimba ezingezansi kuneziphezulu, okungukuthi, lapho kubanda enhlokodolobha kunezintaba noma izintaba.
Ngokwedatha ephethwe yi-AEMET, idolobha elinezinsuku ezinkungu kakhulu ngonyaka liyi ValladolidUZaragoza noSalamanca bayalandela. Kodwa-ke, kunezindawo zesiqhingi saseTenerife, lapho ungabhalisa khona isilinganiso sezinsuku ezingama-60 ngonyaka ngamabhange enkungu.
Inkungu iphelele engenabungozi empilweni, naphezu kokucabanga kwabantu abaningi. Ngezinsuku lapho kunenkungu, njengoba kungekho moya emoyeni, ukungcola kukhulu kakhulu kunosuku olujwayelekile, kepha inkungu ayiyimbi emzimbeni. Umoya ozophefumula ngaphakathi kwebhange lenkungu uyefana uma kwenzeka lesi simo singazange senzeke, umehluko ukuthi ukuhlushwa okuphezulu komhwamuko wamanzi.
Ngiyethemba ngicacisile ukungabaza kwakho okuningi ngalesi simo esijwayelekile sezulu ezinyangeni zasebusika futhi lokho kwenza ukubonakala kube nzima kakhulu kubashayeli, kube ingozi yangempela yokushayela.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Inkungu yakha kanjani